2010: Sivana, Ataovy personalize, Optimize
Sabotsy, Desambra 12, 2009 Zoma, Jolay 27, 2018 Douglas Karr
Tototry ny fampahalalana avy amin'ny media sosialy, fikarohana ary boaty izahay. Tsy mitsaha-mitombo ny boky. Tsy manana latsaky ny lalàna 100 ao amin'ny boaty fampidirako aho handefasana hafatra sy fanairana araka ny tokony ho izy. Ny kalandrie ataoko dia mifandray amin'ny Blackberry, iCal, Google Calendar ary Tungle-ko. Manana Google Voice aho hitantanana antso amin'ny orinasa, ary YouMail hikirakira antso mivantana amin'ny findaiko. Nanoratra i Joe Hall androany fa ny ahiahy momba ny tsiambaratelo sy ny fampiasana angona manokana avy amin'i Google dia mety